Soo dejisan Norton Ghost 15 – Vessoft
Español (de Latinoamérica)
Soo dejisan Norton Ghost
Guji badhanka cagaaran si aad u bilowdo soo dejinta
Download bilaabay, hubi daaqada browser browser. Haddii ay jiraan dhibaatooyin, riix badhanka mar kale, waxaan isticmaalnaa hababka kala duwan ee download.
Soo celinta iyo soo celinta/
Nidaamka hawlgalka: Windows
Qeybta: Soo celinta iyo soo celinta
Dib u eegista qiimeynta:
Ruuxa Norton – software loogu talagalay raad raac xogta iyo soo celiyo. Ogolaaneysa inaad si ay u abuuraan image ah ee hard ama shaqsi qaybaha iyo hagaajiyo nidaamka hab-kabashada. Ruuxa Norton taageertaa adag, CD, DVD iyo Blue Ray saxannada, iyo sidoo kale NAS, sidayaal wijigayga ama innay iyo dadka lugaynaya ee xaafaddaada ama fog oo kale. Software u siinaysaa in archiving automatic, in la qabtaa on jadwalka iyo dukaamada updates ugu dambeeya.
Astaamaha ugu muhiimsan:
Raad raac Data iyo soo celiyo
Awoodda si ay u abuuraan images disk
Raad raac gudaha iyo dibedda
Waxay kaalmo kala duwan ee side
Faallo ku saabsan Norton Ghost
Norton Ghost Xirfadaha la xiriira
Tool in defrag ka drives adag oo ay tayadoodii nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ula kaararka xusuusta, drives kumbiyuutarka iyo aaladaha kaydinta kala duwan u shaqeeyaan.
Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30
Live CD & USB gaari
Software waxay abuurtaa DVD ama USB ah drives bootable. Software waxaa si weyn u isticmaala milkiilayaasha kombiyuutarada aan drive ah indhaha.
Gubasho CD & DVD
Agabka in ay la shaqeeyaan cajalladaha of qaabab kala duwan. Software taageertaa gurmad iyo soo kabashada ee xogta laga badiyay.
العربية, English, Українська...
Tababaraha The awood leh drives adag shaqo-buuxa ah. software waxaa ka mid ah set oo ah qalab loogu talagalay shaqada fudud noocyada kala duwan ee drives.
DAEMON Tools Lite 10.8
Sawirada CD & DVD
Software Tani waxay soo saaraysaa disks sanadeed iyo abuuraa faylasha sawirada qaabab kala duwan. Software wuxuu abuuraa dhowr diskoon oo dhowr ah oo siman.
English, Українська, Français...
Auslogics Disk Defrag 8.0.12
Ku haboon qalab ay tayadoodii iyo hagaajin xasiloonida nidaamka. Software ayaa u ogolaanaya in ay defragment ka cajaladaha adag iyo abaabulo faylasha.
English, Français, Español...
EaseUS Data Recovery Wizard 12 Free, Pro...
Soo celinta iyo soo celinta
software The inuu ka soo kabsado xogta oo kala duwan. software waa ay awoodaan in ay soo kabtaan faylasha lumay ama maqan ka qalab kala duwan oo xambaarsan xogta.
software ah oo si sahlan loo isticmaalo inuu ka soo kabsado xogta of noocyo kala duwan on your computer iyo sidayaal xog kala duwan. software The taageertaa drives adag iyo nidaamka file ka mid ah noocyada kala duwan.
CD & DVD-ga ripper
Software in aad hesho nuqul DVD aan khasaaro tayada. Sidoo kale software ka mid ah qalabka ku cadaadisaa, tirtirto iyo diinta ka kooban drives.
Software inuu ka soo kabsado xogta laga badiyay ka drives adag, flash drives iyo drives indhaha. Sidoo kale software ka taageertaa nidaamka file caan ah.
AOMEI Backupper 4.1 Standard, Professional...
software wuxuu kuu ogol yahay ilaa dib u soo celiyaan nidaamka qalliinka, drives adag ama maqaal qoruhu oo clones cajaladaha oo aan abuuro file image ah.
English, Français, Deutsch...
Macrium Reflect 7.1.3169
Tani waa software ah in lagu xareeyo diskkaaga oo dhan ama xog gaar ah. Software waxay taageertaa heer sare oo ah isku xirka iyo duubista.
Software in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah ee la isticmaala macaamiishooda kale chat. Sidoo kale waxa ay taageertaa awood u leh inay isku mar ku xidhmaan shabakadaha kala duwan oo fariin.
MuseScore 2.2 Standard
Editor The dhamaystiran music oo ka mid ah dhibcaha muusikada la shaqeynayaan ballaaran. Software waxay siisaa badbaado ama download ka mid ah noocyada kala duwan ee xubno ka music la nidaam search sare.
Clean Master 6
Nadiifinta & Waxyeelaynta
Software ayaa si aad u nadiifiso nidaamka ka faylasha haraaga ah oo ku meel gaar ah. Sidoo kale software awood u tirtirto ka plugins iyo codsiyada kala duwan.
Eeg software dheeraad ah
Notepad++ 7.5 Standard...
Google Chrome 66.0.3359.117 ...
WinRAR 5.60 beta